Manokatra fananana vaovao roa any Eropa ny vondrona hotely Maritim iraisam-pirenena
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Manokatra fananana vaovao roa any Eropa ny vondrona hotely Maritim iraisam-pirenena
Nanokatra fananana vaovao any Eropa ny vondrona hotely maritim Hotely maritim - ny Hotel Maritim Paradise Blue Albena any Bulgaria dia mifantoka tanteraka amin'ny faharetana miaraka amin'ny fotodrafitrasa misy azy manokana ary ny Maritim Hotel Plaza Tirana no hotely kintana 5 voalohany voamarina tamin'ny fomba ofisialy.
Mifantoha amin'ny faharetana any Bulgaria
Ilay Maritim Hotel Paradise Blue Albena, kintana dimy vao namboarina dia eo am-baravaran'ny iray amin'ireo tahirin-javaboary tsara tarehy indrindra ao Bulgaria, ny Baltata. Ahitana efitrano 238 ny trano fandraisam-bahiny, ao anatin'izany ny suite 26, studio valo ary efitrano VIP efatra misy lavarangana / terrasety manokana. Misy efitrano fivoriana telo, mahazaka solontena 500, 140 na 80.
Ny vahiny dia afaka mankafy karazan-tsakafo ao an-toerana amin'ny trano fisakafoanana efatra ao amin'ny hotely, ao anatin'izany ny Blue Essential Buffet Restaurant, izay manolotra vokatra isam-paritra tena izy, namboly sy natolotra niaraka tamin'ny tantsaha biolojika ao amin'ny hotely.
Ny faharetana dia avo lenta amin'ny fandaharam-potoana - ny hotely dia mampiasa toeram-pitrandrahana solika manokana hamokarana loharanon'angovo maharitra maharitra ary mandray anjara amin'ny tetik'asa fizahan-tany 'Zero Waste' izay mikendry ny hamokatra fako kely araka izay tratra.
Ny trano fandraisam-bahiny koa dia manana moron-dranomasina manokana, dobo filomanosana misy fahitana amoron-dranomasina, toerana Sense Spa & Wellness miaraka amin'ny sauna, dobo anaty trano ary gym, ary koa fandaharana samihafa amin'ny hetsika ara-panatanjahantena sy fialamboly.
Hotely kintana 5 voalohany eto Albania
ny vaovao Maritim Hotel Plaza Tirana no hotely kintana 5 voalohany voamarina tamin'ny fomba ofisialy. Eo afovoan'ny renivohitra Albania Tirana no misy azy afovoany, ary eo akaikin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Tirana no misy azy.
Ny efitrano fandraisam-bahiny dia misy efitrano fivoriana sy fihaonambe efatra misy vondrona isan-karazany, efitrano sy efitrano 190 mihoatra ny gorodona 23, trano fisakafoanana maromaro ary spa sy spaoro.
Miaraka amin'ny toerana 33 manerana an'i Alemana ary koa hotely any Maurice, Egypt, Turkey, Spain, Malta, Bulgaria, Albania ary China, The Maritim Hotelgesellschaft no vondrona hotely tantanan'ny tompony lehibe indrindra any Alemana. Ny portfolio dia misy hotely misy tanàna afovoany, hotely misy seranam-piaramanidina, hotely amoron-dranomasina amoron-dranomasina, hotely fianakavianan'ny farihy, hotely golf misy golf ary hotely parkland spaoro.
Mandray anjara amin'ny fizahantany tompon'andraikitra ny vazimba Maasai teratany Tanzania